Isifinyezo semicimbi yezinkanyezi yonyaka 2018 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Unyaka ka-2018 uqale isonto nezinsuku ezimbili ezedlule futhi ulayishwe ngawo imicimbi ehlukene yezinkanyezi ongeke wakulahleka. Ukusuka ezinkanyezini eziwayo kuya ekusithekeni.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iziphi izenzakalo ezisilindele unyaka wonke?
1 Imicimbi ehlobene nenyanga
2 Imicimbi ehlobene neLanga
3 Imicimbi yenkanyezi
3.1 Ukuwa okuntekenteke okuntenga
3.2 Izinkanyezi eziwa ngamandla
Imicimbi ehlobene nenyanga
Indawo esondele kakhulu yeNyanga eMhlabeni ibizwa ngokuthi i-perigee. Kulo Januwari 2 odlule, inyanga yayisePerigee. Ngokunikwa ukuthi inyanga ithini, sizokwazi ukujabulela enye inyanga egcwele phakathi nenyanga kaJanuwari 31. Lo mcimbi ongenzeki kaningi ubizwa I-Blue Moon, yize umbala ungabonwa. Ngaphezu kwalokho, kuzokwenzeka ukufiphala kwenyanga okuphelele, kodwa ngeke kubonakale eSpain. Uma ufuna ukubona lesi simo kufanele uye eNyakatho Melika nase-Australia.
Okunye ukusitheka okuphelele kwenyanga kungajatshulelwa ngoJulayi 27 futhi kuzoheha ukwedlula eyedlule, ngoba iNyanga ingabonakala ngethoni ebomvu. Lokhu kusitheka kwelanga kungabonakala eSpain futhi indawo enhle kakhulu izoba seziQhingi zeBalearic, lapho kutholakala khona ukufiphala okukhulu ngo-22: 21 ebusuku (isikhathi senhlonipho).
Imicimbi ehlobene neLanga
NgoJanuwari 3, uMhlaba wabekwa endaweni esondele kakhulu maqondana neLanga, wabeka ngamakhilomitha ayizigidi eziyi-147 kuphela.
NgoFebhuwari 15, kuzokwenzeka ukusitheka kwelanga okuyingxenye, yize kungeke kubonakale eSpain. Izobonakala kuphela e-Antarctica naseNingizimu Melika.
NgoJulayi 6, uMhlaba uzobe usendaweni ekude kakhulu neLanga Amakhilomitha ayizigidi eziyi-152.
Okunye ukusitheka kwelanga okuyingxenye kuhlelwe ngoJulayi 13, kepha ngeke kubonakale naseSpain, kuphela e-Antarctica naseningizimu ye-Australia.
Ngo-Agasti 11 kuzoba nokusitheka kwelanga okuyingxenye okungabonakala kuphela kusuka eGreenland nasenyakatho eyedlulele yeCanada, iYurophu kanye nenyakatho ye-Asia.
Imicimbi ye-meteor shower ihlukaniswe kabili: ebuthakathaka futhi enamandla kunayo yonke. Ake siqale sibheke ukuhlanganiswa kwemicimbi yezinkanyezi zokudubula okungapheli kanye nosuku ezizokwenzeka ngalo.
Ukuwa okuntekenteke okuntenga
NgoFebhuwari sizoba nemicimbi emibili yama-meteor shower esaziwa ngokuthi i-alpha-centáurides ne-delta-leonids. Owokuqala uzokuba ngoFebhuwari 8 bese kuthi owesibili ube ngo-24.
NgoMashi singajabulela ezinye izimvula ezincane ezibiziwe IGamma-Normids neVirginids. Zizokwenzeka ngomhla ka-13 no-25, ngokulandelana.
Ngo-Ephreli sizokwazi ukubona esibhakabhakeni imvula enkulu engaziwa eyabizwa i-lyrical ne-pi-puffy, kwenzeka ngo-Ephreli 22 no-24.
NgoMeyi 20 ungabona ifayili le- Ama-Sagittarids. Lawa ma-meteor abuthakathaka.
NgoJuni 27 izinkanyezi ezazishutha zabiza ama-bootidas, nokwaziwa kancane.
UJulayi kuzoba yinyanga lapho kuzokwenzeka khona imicimbi yezinkanyezi eziningi, yize ingabalulekile njengePerseids ngo-Agasti. Siqala inyanga nge Ama-Pegasids NgoJulayi 10, sizoqhubeka ne- Ama-Phoenicides ngoJulayi 13, sizoqhubeka Ama-Austrinid Pisces kanye ne-delta-aquarids eseningizimu ngoJulayi 28 futhi, ukuphela kwenyanga, ama-alpha-capricorn ngomhlaka 30.
Ngo-Agasti sizoba neminye imicimbi ebuthaka yama- meteor eyaziwa ngokuthi i- ama-iota-aquarids aseningizimu (Agasti 4), ama-delta-aquarids asenyakatho (Agasti 8), ama-kappa-cynids (Agasti 18) no ama-iota-aquarids asenyakatho (Umhlaka-20 Agasti).
NgoSepthemba sizoba nemvula eminingana yezinkanyezi zokudubula ezihamba kancane zisakazeka inyanga yonke. NgoSepthemba 1 sizoba nazo i-alpha-aurigid, i-9 i-delta-aurigid ne-piscid engu-20.
U-Okthoba ubuye abe nezinye izihlambi zemeteor ezibuthakathaka ezaziwa njenge amadraconids (Okthoba 8), li-ace epsilon-geminids (Okthoba 18) nama-orionids (Okthoba 21).
UNovemba unamatshe amane abuthakathaka iMeteor Showers asabalala inyanga yonke. Baziwa ngokuthi ama-taurid aseningizimu, ama-taurid asenyakatho, ama-leonid kanye ne-alpha-monocerotids. Zizokwenzeka ngezinsuku 5, 12, 17 no-21, ngokulandelana.
Ukuvala unyaka ngenyanga kaDisemba, i chi-orionids (Disemba 2), Ama-Phoenicides (Disemba 6), imidlwane / i-vélidas (Disemba 7), ama-monocerotids (Disemba 9), ama-sigma-hydrids (Disemba 12), zidle zona izithambisi (Disemba 20) nama-ursids (Disemba 22). Lezi zimvula kungenzeka zingabonakali kangako, ngoba ngenyanga kaDisemba kuba namafu amaningi.
Izinkanyezi eziwa ngamandla
Imibukiso emithathu yamameteor edume kakhulu izokwenzeka unyaka wonke. Le micimbi ingagcizelelwa kakhulu futhi yaziwe kubalandeli abaningi bezinkanyezi (nalabo abangekho). Le micimbi yile:
Ama-eta aquarids. Ziyaziwa ukuthi zihlotshaniswa ne-Halley's Comet. Kuyishawa semeteor ngomsebenzi we 60 meteors ngehora futhi ingabukwa ngoMeyi 6.
Ngo-Agasti kuzokwenzeka ukubekezela okudumile noma izinyembezi zeSan Lorenzo. Yizihlambi ezingafika kuma-meteor afika ku-100 ngehora futhi azobekwa ephezulu ngo-Agasti 13.
NgoDisemba ishawa ebabazekayo yezinkanyezi zokudubula zonyaka izokwenzeka, amaGeminids. Isilinganiselo sayo sizokwenzeka ngoDisemba 14 bese umsebenzi uzofika kufika kuma-meteor angama-120 ngehora.
Ngalolu lwazi, awunasizathu sokuphuthelwa yiyo yonke imicimbi yezinkanyezi ezokwenzeka kulo nyaka. Zijabulele!
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isifinyezo semicimbi yezinkanyezi yonyaka we-2018